Ezekieri 38 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Gogi anorwisa Israeri (1-16)
Jehovha anotsamwira Gogi (17-23)
‘Marudzi achaziva kuti ndini Jehovha’ (23)
38 Shoko raJehovha rakauyazve kwandiri, richiti: 2 “Mwanakomana wemunhu, tarisa Gogi wenyika yeMagogi,+ iro jinda guru reMesheki neTubhari,+ uprofite kwaari.+ 3 Uti, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Ndiri kukurwisa, iwe Gogi, jinda guru reMesheki neTubhari. 4 Ndichakutendeudza ndoisa zvirauro mushaya dzako,+ ndokubudisa iwe neuto rako rese,+ mabhiza nevatasvi vemabhiza avo vakapfeka zvakanaka kwazvo, vanhu vazhinji vane nhoo huru nenhoo diki,* nemapakatwa; 5 pamwe chete nevaPezhiya, nevanhu veItiopiya nePuti,+ avo vane nhoo diki nengowani; 6 uye Gomeri nemauto ayo ese, neimba yaTogama+ iyo iri kumativi ari kure kwazvo ekuchamhembe, nemauto ayo ese. Ndichakubudisa iwe nemarudzi aya mazhinji auinawo.+ 7 “‘“Gadzirira uye mauto ako ese auinawo ngaagadzirirewo, uye iwe uchava mutungamiriri* wavo. 8 “‘“Ndichafunga nezvako papera mazuva mazhinji. Mumakore ekupedzisira uchapinda nechisimba munyika yevanhu vakadzoswa avo vakanunurwa pabakatwa, vakaunganidzwa kubva kumarudzi mazhinji vakaiswa mumakomo eIsraeri, ayo akanga ava nenguva aparadzwa. Vagari vemunyika yacho vakadzoswa vachibva kune mamwe marudzi uye vese vagere zvakanaka.+ 9 Uchauya sedutu kuzovarwisa, uye uchazadza nyika yacho semakore, iwe nemauto ako ese nemarudzi mazhinji auinawo.”’ 10 “Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Zuva iroro pane pfungwa dzichauya mumwoyo mako, uye ucharuka zano rakaipa. 11 Uchati: “Ndichapinda nechisimba munyika ine misha* isina chinoidzivirira.+ Ndichaenda kunorwisa vaya vagere zvakanaka, vasina chinovanetsa, ivo vese vanogara mumisha isina kukomberedzwa nemasvingo, isina mazariro* kana magedhi.” 12 Uchazviita nechinangwa chekupamba zvinhu zvakawanda, uye kurwisa nzvimbo dzakaparadzwa dzava kugarwazve.+ Uchazviita kuti urwise rudzi runogara pakati penyika urwo rwakaunganidzwa kubva kune mamwe marudzi,+ uye ruri kuunganidza pfuma.+ 13 “‘Shebha+ neDhedhani+ nevatengesi vekuTashishi+ nevarwi vayo vese* vachati kwauri: “Uri kupinda munyika kuti upambe zvinhu zvizhinji here? Waunganidza mauto ako kuti utakure sirivha negoridhe, nepfuma, uchipamba zvinhu zvizhinji here?”’ 14 “Saka iwe mwanakomana wemunhu, profita uti kuna Gogi, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Zuva iroro, uchaziva kuti vanhu vangu vaIsraeri vari kugara zvakanaka, vasina chekutya.+ 15 Uchauya uchibva kumativi ari kure kwazvo ekuchamhembe kwaunogara,+ iwe nemarudzi mazhinji auinawo. Marudzi acho ese iuto guru rakatasva mabhiza, uye iungano huru.+ 16 Uchauya kuzorwisa vanhu vangu vaIsraeri wakaita semakore akafukidza nyika. Mumazuva ekupedzisira* ndichaita kuti iwe Gogi uuye kuzorwisa nyika yangu,+ kuti marudzi andizive pandichazvitsvenesa nezvandichaita kwauri iwo akatarisa.”’+ 17 “Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Hausi iwe here wandakataura nezvake kare kare ndichishandisa vashumiri vangu, ivo vaprofita veIsraeri, avo vakaprofita kwemakore akawanda kuti ndichakuunza kuzovarwisa?’ 18 “‘Zuva iroro, iro zuva richapinda Gogi munyika yeIsraeri,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha, ‘hasha dzangu dzichatutuma.+ 19 Ndichataura ndiine shungu, ndakashatirwa; uye zuva iroro munyika yeIsraeri muchava nekudengenyeka kukuru. 20 Ndichadederesa hove dzemugungwa, shiri dzedenga, mhuka dzesango, zvinhu zvese zvinokambaira panyika, nevanhu vese vari panyika. Ndichaita kuti makomo awire pasi uye kuti nzvimbo dzine mawere dziwe,+ uye ndichakoromora masvingo ese.’ 21 “‘Ndichaita kuti bakatwa rimurwise mumakomo angu ese,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha. ‘Murume mumwe nemumwe acharwisa hama yake nebakatwa.+ 22 Ndichaita zvandakamutongera, ndichaunza denda+ paari uye pachava nekudeurwa kweropa. Ndichaita kuti iye nemauto ake nemarudzi mazhinji aainawo+ vanayiwe nemvura ine simba nechimvuramabwe,+ nemoto+ nesarufa.+ 23 Ndicharatidza ukuru hwangu uye ndichazvitsvenesa pamberi pamarudzi mazhinji, ndoita kuti andizive. Vachaziva kuti ndini Jehovha.’
^ ChiHeb., “murindi.”
^ Kana kuti “misha yekumaruwa.”
^ Kana kuti “nevarwi vayo vese vakaita seshumba dzava nezenze.”